2021 နှစ်သစ်မှာ ပရိတ်သတ်တွေကို စုံတွဲ ပုံလေးတွေချပြလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း – Cele Oscar
လူတိုင်းက နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်း ချင်ကြပါတယ်။ ၂၀၂၁ ရဲ့ ပထမဆုံး နေ့ရက် မှာ ဖြူဖြူ ကတော့ ကျော်ထက်အောင် နဲ့ အတူရိုက်ထားတဲ့ ရိုဆန်ဆန် ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်း က နှစ်ယောက် အတူ MTV လေးတွေတွဲ ရိုက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရရှိခဲ့သူတွေပါ။
ဒီနေ့မှာလည်း အင်္ကျီ အရောင်ဆင်တူလေးတွေနဲ့ ကြည်နူးစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ စုံတွဲ ပုံလေးတွေ ဟာ ပရိသတ် တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ ပါတယ်။ တကယ့်ချစ်သူစုံတွဲတွေလို ပြုမူနေတဲ့ပုံလေး တွေဟာ နှစ်ယောက်သား တကယ်များ ချစ်သူ ဖြစ်နေကြပြီ လားလို့ သို့လောသို့ လောထင်စရာပါပဲ။
ဒီလိုပုံလေးတွေကို ” အချစ်စစ်လား အချစ်တုလား ဆိုတာ နှလုံးသားကပဲ မြင်နိုင်တာ တကယ်ကို အချစ်ရှိတယ် Happy New Year to all our fans. Phyu Phyu & Kyaw Htet. ” ဆိုပြီး တင်ထား တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား တကယ်ပဲ တွဲဖြစ်ခဲ့ရင် ပရိသတ်ကြီး ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း မှတ်ချက်လေးပေးခဲ့ပါဦးနော်။
လူတိုငျးက နှဈသဈမှာ ကိုယျခဈြရတဲ့ သူနဲ့ပဲ ဖွတျသနျး ခငျြကွပါတယျ။ ၂၀၂၁ ရဲ့ ပထမဆုံး နရေ့ကျ မှာ ဖွူဖွူ ကတော့ ကြျောထကျအောငျ နဲ့ အတူရိုကျထားတဲ့ ရိုဆနျဆနျ ပုံလေးတှကေို ခပြွလိုကျပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကတညျး က နှဈယောကျ အတူ MTV လေးတှတှေဲ ရိုကျခဲ့ပွီး ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှု ကို အခိုငျအမာ ရရှိခဲ့သူတှပေါ။
ဒီနမှေ့ာလညျး အင်ျကြီ အရောငျဆငျတူလေးတှနေဲ့ ကွညျနူးစရာ ကောငျးလှနျးတဲ့ စုံတှဲ ပုံလေးတှေ ဟာ ပရိသတျ တှကေိုအံ့အားသငျ့စခေဲ့ ပါတယျ။ တကယျ့ခဈြသူစုံတှဲတှလေို ပွုမူနတေဲ့ပုံလေး တှဟော နှဈယောကျသား တကယျမြား ခဈြသူ ဖွဈနကွေပွီ လားလို့ သို့လောသို့ လောထငျစရာပါပဲ။
ဒီလိုပုံလေးတှကေို ” အခဈြစဈလား အခဈြတုလား ဆိုတာ နှလုံးသားကပဲ မွငျနိုငျတာ တကယျကို အခဈြရှိတယျ Happy New Year to all our fans. Phyu Phyu & Kyaw Htet. ” ဆိုပွီး တငျထား တာပဲဖွဈပါတယျ။ နှဈယောကျသား တကယျပဲ တှဲဖွဈခဲ့ရငျ ပရိသတျကွီး ရဲ့ အမွငျကိုလညျး မှတျခကျြလေးပေးခဲ့ပါဦးနျော။